အကြှနျုပျတို့သညျအစဉျအမွဲဝဘ်ပေါ်မှာရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းများ၏အများဆုံးပါဝင်နိုင်စုဆောင်းမှုတစ်ခုရှိသည်ဘယ်မှာအခမဲ့ညစ်ညမ်းဂိမ်းမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ဤစုဆောင်းမှုကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ပါဝင်နိုင်သည်။ ပထမဦးစွာကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာနည်းလမ်းများအကြောင်းပြောဆိုကြပါစို့။ ငါတို့သည်သင်တို့အသုံးပြုစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာမှအွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားပျော်မွေ့နိုင်မည့်ပလက်ဖောင်းကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ကွန်ပျူတာများနှင့်ဤသည်နေ့ရက်ကာလလူကြိုက်များဖြစ်ကြောင်းအားလုံးမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။ ကျနော်တို့သာအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်း၏အနာဂတ်နေသောဤစုဆောင်းမှု၌မီလီလီတာ5 ဂိမ်းများကိုတပ်ဆင်ထားသောကြောင့်ပါပဲ။, သူတို့ကထံမှလက်ဝါးကပ်တိုင်-ပလက်ဖောင်းဖြစ်ကြသည်ဒါပေမယ့်ပင်ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကြောင့်အချို့သောအမှား၏အလယ်၌ပိတ်ထားရှိသည်သာဂိမ်းမှတဆင့်တစ်ဝက်ကစားမဆိုမနှစ်မြို့ဖွယ်အံ့သြဖွယ်များရှိသည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တင်သွင်းမီအရာအားလုံးကိုစမ်းသပ်ဖို့အချိန်ကိုယူ။ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးမ်ိဳးဆက္မွာတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့အျခားေသာအဂၤါရပ္မ်ားစြာပါ၀င္လာပါတယ္။ သငျသညျပိုကောင်းဂရပ်ဖစ်ပျော်မွေ့ရကြလိမ့်မည်နှင့်သင်ပင်ဇာတ်ကောင်မှတဆင့်စိတ်ကူးယဉ်ပြေးလမ်းမှရှာဖွေနေကြသည်လမ်းကနေဂိမ်းအကြောင်းကိုအရာအားလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ရလိမ့်မယ်။
စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းပြောနေတာဒီကျနော်တို့ပါဝင်နိုင်နေသောမှအခြားနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တောင်မှပိုပြီးရှားပါးပေမယ့်ကန့်သတ်ကျော်အချို့ကစားသမားကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်အချို့သောအပါအဝင်သင်စဉ်းစားစေခြင်းငှါညစ်ညမ်းအပေါငျးတို့သအမျိုးအစားများနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ နှင့်ထည့်သွင်းကျနော်တို့နေပါစေအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတှကျဂိမ်းရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ သင်ဖြောင့်မှန်လျှင်ပင်သင်လိုအပ်သမျှကိုတွေ့လိမ့်မည်၊လိင်တူချစ်သူ၊လိင်တူချစ်သူ၊လိင်တူ၊လိင်တူ၊လိင်တူ-စပ်စုခြင်းနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းသို့ပင်လျှင်။ ရုံယနေ့ညကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူကွညျ့ရှု၏ဤလောကလာစူးစမ်း။
ဒီဆိုဒ်ကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာဘယ်ဂိမ်းတွေကိုကြည့်ရမလဲ၊ဘယ်လိုစုစည်းရမလဲဆိုတာကိုသိပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုလာတဲ့သူတိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းလိုအပ်တာတွေကိုရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာကျနော်တို့လေးအဓိကကဏ္ဍများသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုခွဲခြား။ သင်ဖြောင့်,လိင်တူချစ်သူ,လိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်တူချစ်သူဂိမ်းနိုင်ပါတယ်။ သင်သာသင်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဂိမ်းမြင်ရပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်သေတ္တာများစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ပြီးတော့ကျနော်တို့အရာအားလုံးကိုတွဲတင်,သင်ရုံသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်နှင့်ဆက်စပ်သောသော့ချက်စာလုံးရှာနေရှာဖွေရေးဘားကိုအသုံးပြုရန်အဘို့အလွယ်ကူပါလိမ့်မည်တိုင်းဂိမ်းဘို့ငါတို့ဆိုက်ပေါ်မှာဤမျှလောက်များစွာသောစကားစုရှိပါတယ်., ကျနော်တို့ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ကြိတ်,နို့နှင့်သကြားရုပ်ပြောင်မှအရာအားလုံးရှိသည်,ငါတို့မှာဂူးဂဲလ်အတွေ့အကြုံဂိမ်းများနှင့်လိင်တူချစ်သူချိန်းတွေ့ခြင်း,ဒါပေမယ့်လည်းအားလုံးကပုံစံများ,အမျိုးသမီးလိင်တူချစ်သူများအမျိုးသမီးများ,အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းနှင့်စှဲလေ့ကျင့်ရေးတို့ပါဝင်သည်. ကျနော်တို့တောင်မှသင်တို့ရှိသမျှကိုလိင်အမျိုးအစားများအတွက်ရုပ်ပြောင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေအများကြီးရှိသည်,သင်ကျော်ကြားဇာတ်ကောင်များ,အဲလျဆာနှင့်လိခ်ကနေသူငယ်၏သို့မဟုတ်သေစားသေစေသူမှသားငယ်များပါစေပါလိမ့်မယ်အရာ.
ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းမျိုးစုံဂိမ်းစတိုင်များ၌သင်တို့ဆီသို့လာမယ့်နေကြသည်။ တချို့ကအချို့သောကြောက်မက်ဘွယ်တဦးတည်းလိင်အစည်းအဝေးများနှင့်အတူတိုက်ရိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြသည်။ အခြားသူများကိုသင်လိင်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှစ်ဦးစလုံးမှတဆင့်အပြန်အလှန်ပျော်မွေ့တံ့သောအချို့သောရှုပ်ထွေးသောကမ္ဘာနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ ကျနော်တို့တောင်မှလိင်မြင်ကွင်းများနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်အဲလစ်ဇဘက်ပုံပြင်များနှင့်အတူဂရပ်ဖစ်ဝတ္ထုနေသောစာသားကိုအခြေခံပြီးဂိမ်းရှိသည်။ နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့တစ်အသိုင်းအဝိုင်းအတွေ့အကြုံကိုပေးစေခြင်းငှါဆိုက်ပေါ်တွင်အသစ်လုပ်ကြံလိင်ဂိမ်းအကောင်အထည်ဖော်အပေါ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်အပေါ်အချို့သောဂိမ်းကစားချင်အခါတိုင်း,သင်လိုအပ်သမျှအင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကနှင့်တက်-နေ့စွဲဘရောက်ဇာကိုပြေးနိုင်သည့်ကိရိယာ။ သငျသညျဂိမ်းစတင်ပြီးတော့ပဲကစား။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ပါပဲ။ အဘယ်သူမျှမကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောကြော်ငြာနှင့်တစ်ဦးညစ်ညမ်းဆိုက်မှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတက်ပေးခြင်း၏အန္တရာယ်။ ဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းတွေမှားသွားနိုင်ပါတယ်အဘယ်သူမျှမဒေါင်းလုပ်နှင့်အရစ်ကျ။ ထိုမျှမကနတ်ဆိုးဂိမ်းများကိုသင်ကျီစားပြီးတော့ပဲသင်ပယ်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှိသောအရာအားလုံးသည်ညစ်ညူးသောနည်းလမ်းများဖြင့်သင့်ထံလာခြင်းဖြစ်ပြီး၊သင်အော်ဂဇင်ရှိသည့်အခါသင်လုပ်သမျှကိုချေဖျက်ရန်အကြောင်းပြချက်များစွာပေးလိမ့်မည်။, ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ဂိမ်းရွှေ့နှင့်အများဆုံးစွဲငြိဖွယ်ရာလမ်းအတွက်အရာအားလုံးပျော်မွေ့။